Fehezo ny fotoanan'ny horonan-tsary amin'ny Adobe Premiere | Famoronana an-tserasera
Paul gondar | | Fitaovana famolavolana, Cheats, Tutorials
Fehezo ny fotoan'ny horonan-tsary amin'ny Adobe Premiere mamorona horonantsary mamoronas amin'ny endrika matihanina madio indrindra manambatra hafainganam-pandehan'ny horonan-tsary mahazo valiny manintona be ianao. Milalaova amin'ny fotoanan'ny horonan-tsarinao mba hamoronana dinamika hafa tanteraka ary hahatratrarana vokatra mahafinaritra.
Amin'ny fomba tena mora azonao mianatra ny fotoana handefasana horonan-tsary Premiere, Mandritra izany fotoana izany dia hikasika ireo hevitra tena lehibe momba ny fanovana horonan-tsary amin'ity programa matihanina ity ianao. Fotoana master, fanovana horonantsary master misaotra anao creativosonline.
Hanara-potoana amin'ny Adobe Premiere dia tena ilaina raha te-hanatratra izany isika fanovana video samihafa sy mamorona afaka milalao ny gadona an-tsary ny horonan-tsary, amin'izay dia mahatratra vokatra mahaliana kokoa ho an'ireo tetikasanay momba ny audiovisual. Imbetsaka isika dia tsy maintsy manao an'io karazana vokany io satria zavatra be mpampiasa eo amin'ny tontolon'ny audiovisual ity, miadana ny fotoana, manafainganana azy ary ny fanovana isan-karazany mifandraika amin'ny fizotry ny horonan-tsary.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika hamoronana ity vokatra mahaliana ity dia ny fanokafana tetikasa iray Premiere miaraka amin'ireo horonan-tsary hiasantsika.
Vantany vao nosokafana ilay horonantsary Premiere, ny tokony hataontsika dia mamorona fisafidianana clip avy amin'ireo horonan-tsary ireo.
Ny fomba mety manaova fanapahana amin'ny horonan-tsary dia alohan'ny handalovantsika ny fizotry ny fotoana satria mahazo diovy ny horonan-tsary teo aloha. Mba hanaovana izany fanadiovana mialoha ny ataonay dia zarao roa ny horonan-tsary Click avy amin'ny faritra ambany, raha vantany vao vita ity amin'ny tapany ambony dia haseho ilay sombin-dahatsary, eto no hanaovanay ilay fanapahan-jiro safidy manindry fidirana (fanombohana) ary fivoahana (faran'ny) Milalao amin'ireto safidy roa ireto dia misafidy ireo ampahany amin'ilay horonantsary mahaliana antsika izahay, amin'ny farany dia sintominay mankany amin'ny fizotran'ny fotoana amin'ny alàlan'ny fanindriana ny fampisehoana video. Raha toa ka misy horonantsary eo amin'ny fizotry ny fotoana, ny ataontsika dia miala amin'ity dingana ity ary mankanesa any amin'ilay manaraka.
Notaritarinay nankany amin'ny fizotry ny fotoana ny lahatsarinay ary manomboka amin'ny dingana fisafidianana faran'izay azo isafidianana isika mba hilalao miaraka amin'ny ora horonan-tsary. Azontsika atao tsara ny mijery an-tsary ilay horonantsary raha mamindra ny bara eo ambanin'ny fizotry ny fotoana isika.
Raha vantany vao manana ny fandaharam-potoananay isika, ny zavatra manaraka hataontsika dia ny manomboka manapaka azy ireo, noho izany dia mila mampiasa ilay fitaovana antsy. Manomboka manapaka horonantsary izahay na aiza na aiza tadiavinay ovao ny hafainganan'ny video.
Aorian'ny fanaovana ny fanapahana dia tsy maintsy tsindrio ny horonan-tsary amin'ny bokotra ankavanan'ny totozy ary safidio ny safidy hafainganana / faharetana. Arakaraka ny zavatra tadiavintsika no hanovantsika ny hafainganam-pandehan'ny horonan-tsary amin'ny fomba iray na hafa, raha tiantsika hanana hafainganam-pandeha ambany kokoa ilay sombin-javatra tokony manitatra ny fotoana faharetana ny horonantsary ary raha tiantsika ho haingana dia haingana dia tsy maintsy atao izany hanafohezana ny faharetany.
Afaka mampihatra a vokan'ny famerenana haingana be manaraka ny dingana mitovy amin'ny taloha fa tsy manova ny hafainganam-pandehan'ny horonantsary fotsiny dia safidintsika ny safidy hanodina ny hafainganana. Aorian'izany, ny zavatra manaraka tsy maintsy ataontsika dia ny manohy mampihatra ny fanapahana sy ny vokatra rehetra tadiavintsika ao amin'ny lahatsarinay.
Fehezo ny fotoanan'ny horonan-tsary dia zavatra iray be mpampiasa amin'ny karazana tetikasa audiovisual, manomboka amin'ny sinema ka hatramin'ny clip video, ity karazana fanovana ity dia sary manintonal. Ankehitriny misaotra an'i Premiere ary ny interface tsara izay azontsika atao dia afaka manao an'io karazana effets professional io haingana be isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Fehezo ny fotoanan'ny horonan-tsary amin'ny Adobe Premiere
Fonosana divay maka tahaka ny sarintany ambanin'ny tany
Lesona 10 fiainana avy amin'ny famolavolana